Sheekh Shariiif Sheekh Axmed oo markii ugu horeysay ka hadlay Siyaasada Dalka iyo guulaha ee gaartay Dowlada Cusub | Salaan Media
Home Wararka Sheekh Shariiif Sheekh Axmed oo markii ugu horeysay ka hadlay Siyaasada Dalka...
Sheekh Shariiif Sheekh Axmed oo markii ugu horeysay ka hadlay Siyaasada Dalka iyo guulaha ee gaartay Dowlada Cusub
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaalada dalka Soomaaliya tan iyo markii dalka uu majaraha u qabtay ninkii xilkaasi uga guuleestay ee Xassan Sheekh Maxamuud.
Sheekh Shariif oo lahadlayay wakaalada wararka Faransiiska AFP ayaa yiri, “Dowlada Soomaaliya waxaa u soo hoyatay guul ay waqti dheer sugeysay.
Guusha ayaa waxa ay tahay in cunaqabateyntii hubka laga qaaday dalka labaatan sano kadib ,Waxa ay arintaasi horseedeysaa in dalku uu horumar ka sameeyo dhanka difaaca xuduudaha, Shacabka iyo dowlada in ay isukaashadaan ayaan ugu baaqayaa”.
Madaxweynihii hore ee dalka ayaan ka hadlin xaalada dalka tan iyo markii dhamaadkii sanadkii tegay looga guuleestay doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka ka dhacay.
Hadalka Sheekh Shariif ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo Xayiraadii hubka dowlada Soomaaliya laga qaaday, waxaana xusid mudan in dowladii uu Sheekh Shariif madaxda ka ahaa in badan ay u ola oleysay in Soomaaliya laga qaado cuna qabateyntaasi.